Ciidamada Dowladda oo xiray Dhamaan wadooyinka soo gala Dhuusamareeb.Maxaa Soo kordhay? — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Ciidamada Dowladda oo xiray Dhamaan wadooyinka soo gala Dhuusamareeb.Maxaa Soo kordhay?
Ciidamada Dowladda oo xiray Dhamaan wadooyinka soo gala Dhuusamareeb.Maxaa Soo kordhay?
Dhuusamareeb(Caasimadatimes)-Wararka laga helayo Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Ahlusunna ay bilaabeen dhaq dhaqaaqyo ay uga baxayaan Magaaladaas.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in saakay Ciidamada Ahlusunna ay baneeyeen Xarunta.Dowladda Hoose Ee Degmada Dhuusamareeb,isla markaan ay la wareegeen Ciidamo katirsan kuwa Dowladda soomaaliya.
Ciidamada Dowladda ayaa waxaa sidoo kale ay xireen dhamaan wadooyinka soo gala Magaalada Dhuusamareeb,waxana hoggaanka Sare ee Ahlusunna ay xilligaan ku sugan yihiin Xarunta Inji ee Magaalada dhuusamareeb.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo qeybaah Bulshada kula hadlayay Guriceel ayaa sheegay in waxa ay hadda arkayaan aysan aheyn waxyaabihii ay kula heshiiyeen,isla markaana ay yihiin dib u noqosho.
Previous articleImaaraadka Carabta oo qarka u saaran in dhaqaalihiisa Burbura.Musiibo kaga soo wajahan Dekedaha Soomaaliya.
Next articleRag lagu eedeeyay Miino aasid oo Maxkamadda Ciidanka xukun yaab leh ku riday.
DEGDEG:Rasaas sababtey Dhimasho iyo Dhaawac oo ka dhacadey Dhuusamareeb iyo Cadaado...
Dowladda oo Ciidamo dheeraad ah geysay Dhuusamareeb Cabsi weyn oo ka...